Ama-Mo-Sys Camera Motion Systems Paves The Way For More Innovative Filmmaking - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Ama-Mo-Sys Camera Motion Systems Paves The Way For More Innovative Filmmaking
Njengomuntu obonakalayo ophakathi, ifilimu ifaka izinto eziningi zobuchwepheshe ngaphakathi kohlaka lwayo. Ezingeni eliyisisekelo, ukwenza ifilimu kulula njengokusebenzisa ikhamera evamile ukwenza amafilimu ajwayelekile wasekhaya asebenza njengengxenye yenqubo yokuhlolwa kokuqala. Namuhla, ifilimu ingenziwa kwisabelomali esiphansi ngekhamera yedijithali ejwayelekile. Kodwa-ke, ukusebenzisa izibonelo ezinjengalezo okukhulunywe ngazo, ngokulinganisela njengoba zinamandla abo kwezobuchwepheshe, kusebenza kuphela ukusebenza ngendlela yesikole esidala kakhulu ukukhiqiza ifilimu. Ifilimu eliphakathi nendawo liye laqhubeka nokuvela njengoba nobuchwepheshe buye benza okungcono kakhulu uma kukhulunywa ngokuthuthukisa ifilimu lama-thematic nakho okwazi ukukhiqiza.
Uma kukhulunywa ngemingcele yezobuchwepheshe ifilimu iwelele, ukugqwayiza nezithombe ezinyakazayo ngokungangabazeki ziyindawo ezithakazelisa kakhulu futhi eziyinselele ukungena kuzo. Lezi zindawo, yize zingenakukholwa, zidinga imininingwane eminingi ukuze amandla abo asetshenziswe ngokuphelele, futhi ukuze lokhu kwenzeke ubuchwepheshe obaxhasayo kufanele bunikeze izindlela ezanele zokusebenza. Uma ubheka amafilimu lapho ukuthinta okukhethekile okungene khona kumasimu amasha, ungabheka izibonelo ezinjengokuthi UCaptain America: Umphindiseli Wokuqala, I-Wall-E, Futhi The Case Curious sakwaBenjamini Button, ezingakwazanga ukuthuthukisa nje, kepha ziphinda zenze ifomethi eyisisekelo kakhulu yezithombe zibe yinto engaphezu kwendawo yalokho okungenziwa ngumklami wengubo noma i-CGI eyinkimbinkimbi. Yilapho Ama-Mo-Sys Camera Motion Systems ingena esithombeni ngokusebenzisa amakhamera abo ajulile kakhulu kanye nokuthuthuka okuhlukahlukene ababanikeze amafilimu ahlukahlukene eminyakeni eyishumi edlule futhi eqhubekayo.
Kulabo abangawazi umsebenzi wabo, iMo-Sys Camera Motion Systems ubuchwepheshe bekhamera yemikhakha yomkhakha wezamafilimu nowokusakaza. Uma kukhulunywa ngobubanzi ithimba labo elimangalisayo nemikhiqizo yekhamera efinyelela kulo, izinhloso zabo zigxila kakhulu emakhanda akude & kulawula ukuhamba, ukusakazwa kwamarobhothi, ukulandela ngomshini ikhamera nokukhanya kwe-AR, ukukhiqizwa okubonakalayo kanye ne-VR, nokubuka ngamehlo okusele. Ngamagama alula, i-Mo-Sys isebenza ukuxhasa ubuchwepheshe befilimu njengendlela yokuqhakambisa izithombe eziyinkimbinkimbi esizifakazayo kwifilimu ngokokudluliswa kwaso ngokweqile kepha sisazithola sizibuza ngokuqagulwa kwendlela okwenziwe ngayo.
Isibonelo esisodwa somsebenzi kaMo-Sys sifaka ifilimu Gravity, i-2013 Oscar Nominated Sci-Fi Epic eholwa ngu-Alfonso Curon, esondela eminyakeni yayo eyisithupha yokugubha. Igalelo likaMo-Sys ku- Gravity beza noxhaso olunikezwe iDP yefilimu, u-Emmanuel 'Chivo' Lubezki ngekhanda labo elikude, i Lambda.
Imodeli yakamuva yeWundda, iMo-Sys Lambda 2.0, yinhloko eyi-110 Ib 2 / 3 axis eyihlane enesici sokulawula ukuhamba. Yakhelwe ngokukhethekile amaphakheji enekhamera esindayo eyengeziwe, futhi lokhu kungumphumela wokuthi ifakwa kanjani ngaphambili ngamapuleti wekhamera ye-telescopic, evumela ukulungiswa okusheshayo nokulula okwenziwe nganoma yisiphi isayizi sephakeji lekhamera ngisho ne-3D-stereoscopic mirror rigs. I-Lambda 2.0 iza nesici sokulawula isikrini esisebenzayo esinobungane futhi sisebenzisa ngokuphelele isibonisi esibonakalayo somsebenzisi esenza ukuguqula izilungiselelo, ukuqopha umnyakazo nokudlala emuva emuva inqubo esheshayo futhi elula. Noma iyiphi idatha yokunyakaza ingarekhodwa futhi isetshenziselwe i-VFX.
Enye into enhle yeWundda, ukuthi yesimo sayo lapho endaweni lapho ikhanda lama-axis amabili lingadinga ukulungiswa, lingathuthukiswa kalula kube yimodeli yama-eksisi amathathu ne-360˚ roll axis. Futhi, uma ukuqiniswa kweGyro kudinga ukungezwa, lokho bekungeke kube khona ngaphandle kwendawo kungenzeka. I-Lambda 2.0 nayo ine-zero backlash, okusho ukuthi akukho zinkinga zokukhwela, futhi ngenxa yalokho akukho mfutho. I-Lambda 2.0 nayo inamagiya aklanywe ngokukhethekile abonakalise ukuthi athembekile futhi aqinile, kanti futhi ikwazi ukubekezelela isimo esishisayo nesibandayo sokushisa esingaqhamuka nemvelo ebingasongela ngokwemvelo ukuthi inciphise futhi iphinde ibenciphise ukunyakaza kwayo ngesikhathi sokuqoshwa kwendawo ezokwenza umcimbi kufanele uthembele kuzindawo ezishiwo.
Lapho ubhekisisa isihloko sokuhamba kwezimo zekhamera, i-Lambda 2.0 ifanela kakhulu esigabeni. Manje, endabeni yefilimu enjengokuthi Gravity, ebedinga ama-lambdas angaphezu kwamane, asetshenziselwa ukusekela i-Bot & Dolly, okuyi-right enembile ye-robotic motion rig.
Ngokusebenzisa la ma-Lambdas, u-Emmanuel Lubezki wathi lokho, "Cishe konke ukudubula kwenziwa ngekhanda lama-robotic amakhamera avela kuMo-Sys," futhi basebenzise i-zero backlash ye-zero ekhanda nokuguquguquka okukhulu okucacile njengendlela yokunciphisa izithunzi zobuso bomdlali ngesikhathi sokudutshulwa okuthile. Ukubambisana phakathi kwe Gravity abasebenzi befilimu noMo-Sys baphinde bacaciswa kakhulu ngumphathi wefilimu i-VFX, uTim Webber, owathi lapho ikhamera ihamba esikhundleni somuntu, yayisuka nje izungeze izinhlamvu, ngenkathi iguquka isuka ekujuleni kobubanzi bendawo ibanga kakhulu vala ingxoxo-mpikiswano phakathi kwezinhlamvu, nokuphikisana. Lokhu kwenziwa konke kungakapheli imizuzwana nje, kanti nomsebenzi wekhamera walolu hlaka oludingekayo wayefuna iWundda, eyayivumela ikhamera ukuthi ihambe ngokukhululeka lapho izungeza abadlali, futhi ngaphandle kokuzibeka kunoma yiziphi izikhundla ezingathandeki ezinikezwe ukubonwa okuyinkimbinkimbi kwefilimu efana Gravity lapho umlingiswa emane entanta indawo ezungeze ihora nesigamu sesikhathi sesikrini. Izinyathelo eziyinkimbinkimbi ezikhonjiswe kwifilimu manje zase zihlelelwe ukusetshenziswa kwe-choreography enkulu futhi kwaqoshwa ngaphakathi Autodesk UMaya futhi kamuva ngenkathi kukhiqizwa kudlalwe emuva yirobhothi yeBot & Dolly. Kodwa-ke, isidingo sokugcina umkhondo walezi zimo eziningi sangezwa kuphela umsebenzi omkhulu weLundda futhi yikhono lokwenza ekusebenzeni kwekhamera okuguquguqukayo kakhulu nokuhamba ngokukhululeka.
U-Olli Kellmann, umphathi wefilimu olawula ukunyakaza uthe "Lezi zinto kufanele zihlolwe, futhi kunezinto eziningi ezingaphazamisa ukuhamba kwezilungiselelo ezingenawo umthelela kwikhamera ebonakalayo ngaphakathi kwendawo ye-CG. Izinto ezinjengamandla emoto, nokuthi ukushesha namandla amandla adonsela phansi kuthinta kanjani i-rig. " Ekwenzeni ezinye izinselelo ezazibabekele zona, u-Ollie nozakwabo uRaul Rodriguez baqala ukudlala ukuhamba okurekhodiwe emuva nge-10% yejubane labo langempela base belikhulisa laze lafika kwi-100%. Ngokusebenzisa ukudlala ngokuhamba kancane, babekwazi ukulungisa noma yiziphi izintambo futhi benze izinguquko nganoma yisiphi isikhathi lapho ikhanda lifinyelela umkhawulo walo. Kodwa-ke, u-Olli akazange abone ingxenye enkulu yalezo zingqinamba ngenkathi kuqhubeka inqubo, enikezwe ukuthi babehamba malini, okugcizelela futhi umsebenzi oncomekayo wamandla wekhanda likaLambda.
Ikhanda leLambda liphinde lanikeza uChivo inketho yokulayisha nokudlala kabusha ukuhamba okwenziwe ngaphambilini okwasetshenziswa kwifilimu. Manje, yize lokhu kususwa bekurekhodwe ngaphambilini, iqiniso lokuthi iWundda inikeze ukuguquguquka okukhulu ngesikhathi senqubo yokudubula yenza lula kuphela izinto ezithile njengokuphrinta kabusha isigameko, ukucolisiswa kokuhamba kwekhamera ethile, nesikhathi sokuphendula esidingekayo ukufanisa ukunyakaza kwabadlali. Yonke i-choreography nokuhlelela emhlabeni kungafakwa endaweni yesehlakalo, kepha ukuhamba nokusebenza isikhathi kususelwe emsebenzini nakho kuyizinto ezidingekayo, iLiverda ithuthukisa kakhulu.
UMichael Geissler, Umnikazi kanye noMsunguli, Ama-Mo-Sys Camera Motion Systems
ILambda ingesinye sezimangaliso eziningi zobuchwepheshe ezinikezwe abakwaMo-Sys futhi umsunguli onobuhlakani obukhulu nomnikazi uMichael Geissler, othe engxoxweni ye2017 uthe, “Ngingumxazululi wezinkinga. Yilokho engikujabulelayo, ” okuhlanganisa ngempela ukuthunyelwa okuyinhloko kweMo-Sys. Igalelo labo ekunikezeni ukuthuthukiswa kwezobuchwepheshe entweni yezobuchwepheshe ye ukukhiqiza ifilimu Inqubo, okungelula neze, futhi iba yinselele ngokwedlulele njengoba ubuchwepheshe buvela, ikhombisile amandla abo okuhlinzeka ngokuhamba okuningana, ukuguquguquka kanye nokuphindaphinda okuncane njengendlela yokufaka umhlaba ngaphezulu ngesikhathi sokuthwetshelwa izigcawu ezingasebenzi ku-wow kuphela ababukeli, kepha futhi basebenze ukukhuthaza abaculi emhlabeni wonke abanentshisekelo yokusebenza kwifilimu nokugqwayiza.
Ukwazi kabanzi mayelana ne-Mo-Sys Camera Motion Systems, ungavakashela online at www.mo-sys.com, noma ungazihlola Umbukiso we-2019 IBc e-Amsterdam in IHholo 6 - 6.C12 ne IHholo 8 - 8.F21.
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida Umnikelo I-Digital Nirvana OKWE I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-IBC ukuqapha imidiya SJGolden - Ama-spears nama-Arrows I-subtitling I-COLONIE / Chicago I-Ultra HD Forum Izinhlelo ezihlukahlukene Umlingisi wevidiyo esingokoqobo virtual	2019-07-31
Ngaphambilini: Indawo yokuqala yokukhiqiza yaseSaudi Arabia ifaka iBaselight
Olandelayo: I-IBC2019 ibona izixazululo ezisekwe ngamafu ezilula ze-Simpso eziqinisekisa izinkampani zemidiya nezokuzijabulisa zihlala phambili ijika lobuchwepheshe